नोभेम्बर for को राशिफल भनेको के हो? - राशिफल
नोभेम्बर for को राशिफल भनेको के हो?
प्रश्नहरू र उत्तम उत्तरहरू - नोभेम्बर Birth जन्मदिनको राशिफल
एक वृश्चिक मा जन्म भएको रूपमानोभेम्बर, तपाईंको लजालु, कलात्मक र दृढ प्रकृतिले तपाईंको व्यक्तित्व परिभाषित गर्दछ। जबकि अन्य ध्यान केन्द्रित हुन मनपर्दछ, लाइमलाइटले तपाईंलाई असहज बनाउँदछ। जसरी लजालुपन रहस्य भेट्छन्, तपाईं बरु निजी मा तपाईंको काम पूरा, ठूलो लक्ष्य संग लक्ष्य हासिल गर्न को साथ काम गरीरहेको छ।
तथ्य पद तपाईको जन्म महिनाले तपाईलाई प्रकट गर्ने कुराहरु प्रस्तुत गर्दछ जनवरीमा जन्मेका बच्चाहरु हेडस्ट्रstrong्ग र कट्टरपन्थी मानिन्छ जब उनीहरू बढ्दै जान्छन् महत्वाकांक्षी हुन जान्छन् जनवरीमा तपाई जन्मेको मान्छे हो निगरानीको रुपमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ अरूको बारेमा र आफैंको बारेमा जान्नुहोस् बच्चा बच्चाहरूको पनि सँगी मानवलाई सिकाउने र आफैलाई सुधार गर्न मद्दत गर्ने तीव्र इच्छा हुन्छ। फेब्रुअरी, यदि तपाइँ फेब्रुअरीमा जन्मनुभएको थियो भने, तिनीहरू फेब्रुअरीमा धेरै कलात्मक र रचनात्मक हुन सक्छन् - बच्चाहरू पनि धेरै स्मार्टका साथ फेब्रुअरीमा जन्मेका मानिसहरू स्वतन्त्र विचारकहरू हुने सम्भावना बढी हुन्छन् र कहिलेकाँही विद्रोही हुन्। राम्रो कुरा के हो भने तिनीहरू वास्तवमै उनीहरूसँग सम्पर्कमा थिए। व्यक्तित्व र उनीहरू के चाहन्छन् जान्नुहोस् फेब्रुअरी बच्चाहरू कहिलेकाँही आक्रामक हुन सक्छन, तर उनीहरूसँग पनि एउटा संवेदनशील पक्ष छ जुन मानिसहरूले वास्तवमै प्रशंसा गर्छन् मार्चमा जन्मेका मानिसहरू अधिक भन्दा बढी तपस्या गर्ने हुन सक्छन् यदि तपाईं हुनुभएको भए मार्चमा तपाईं सामान्यतया आफ्नो वास्तविक व्यक्तित्व राख्नुहुन्छ तपाईलाई कसैलाई राम्रोसँग थाहा नभएसम्म लुकाउने शिशुहरू प्रायः सबैका लागि राम्रा हुन्छन् र तिनीहरू सबैले सँगै बस्न चाहान्छन् किजले भने सद्भाव धेरै महत्त्वपूर्ण छ मार्चका लागि शिशुहरू मार्चमा जन्मेका मानिसहरू धेरै विश्वासयोग्य हुन्छन् यो सत्य हो कि विश्वास भंग नभएसम्म, तब सबै शर्तहरू हुन्छन् अप्रिलमा बाहिर बच्चाहरू प्राय: बलिया र खेलकुद हुन्छन्, तिनीहरू जहिले पनि अप्रिलमा भएका मानिसहरूका वरिपरि देखिन्छन् जुन मायाको ध्यानमा जन्म लिएका छन् र उनीहरू थ्रिल खोज्नेहरू एक कारण उनीहरू हुन्। जहिले पनि हतारमा हुन्छन् किनकि तिनीहरू अर्को एड्रेनालाईन भीडको खोजीमा रहेका छन् अप्रिल शिशुहरू प्रायः कुनै पलंग आलु नै हुँदैनन् यदि तपाई अप्रिलमा जन्मनुभएको थियो भने तपाईको जीवनमा धेरै कार्य र कार्य साहसिक सम्भावना हुन्छ तपाईको जीवनमा धेरै व्यक्तिहरू आकर्षक हुन सक्नेछन्। उनीहरूको बाँया मस्तिष्कको मस्तिष्कको आधा जी आधा भन्दा बढी प्रयोग गरेर, जसको अर्थ हो कि तपाईं संख्या भन्दा तथ्यगत हुनुहुन्छ र तथ्यहरू खुसी हुनको लागि तपाईं सुत्नको लागि महान् सपनाहरू गर्नुहुन्छ र तपाईंको भविष्यको लागि पनि यदि तपाईं जन्मनुभयो भने मे प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ दिनमा तर्क र रातमा ठूलो सपना। जुन जूनका बच्चाहरू धेरै संवेदनशील हुन्छन् जुन जूनमा जन्मेको कसैलाई दु: ख दिन धेरै लिदैन तर उनीहरूले तपाईंलाई थाहा दिदैनन् किनकि उनीहरू अत्यन्तै शिष्ट जूनका बच्चाहरू नरम-बोलीका हुन्छन्, तर उनीहरूका कारण शान्त व्यक्ति प्रायः उनीहरूको कुरा सुन्छन्। र उनीहरूको सल्लाह गम्भीरतासाथ लिन्छन्।
यदि तपाईं जूनको बच्चा हुनुहुन्छ भने अरू मानिसहरूलाई खुसी पार्न चाहानुहुन्छ जब तपाईं अर्को व्यक्तिको समान चीज चाहानुहुन्छ, यदि तपाईं अरूको लागि अलग रहन सक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईं जुलाईको अवसरमा जन्मनुभयो भने तपाईं पूर्ण ऊर्जा पाउँदै हुनुहुन्छ, मानिस रमाईलो छ। तपाईंको साथीहरूसँग बाहिर जानुहोस्, तपाईंको ज्वलन्त व्यक्तित्व हेर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंसँगै समात्नुहोस्, आफैंलाई केहि भन्नुहोस्, यो केवल एक सेकेन्ड लाग्दछ जब तपाईं अगस्तमा जन्मनुभयो भने एक प्रफुल्लित वापसी ersonable संग फिर्ता आउन तपाईं सम्भवतः एक जन्म कार्यकारी अगस्ट हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले यी नेतृत्व कौशलहरू दुबै व्यवसाय र व्यक्तिगत जीवन दुवैमा फस्टाउनको लागि सेप्टेम्बर सेप्टेम्बरमा बच्चाहरू धेरै विवरण-उन्मुख हुन्छन् यदि तपाई सेप्टेम्बरमा जन्मनुभयो भने तपाईं सम्भवतः सिद्धतावादी हुनुहुन्छ, तपाईसँग जहिले पनि सबै कुरा पूर्ण हुनु आवश्यक छ, र तपाईले अपेक्षा गर्नुभए अनुसार सेप्टेम्बरका बच्चाहरूसँग पनि हुन्छ। ब्यक्तिगत जीवनका साथसाथै तपाईको निजी जीवनको संगठन र विवरणहरूको व्यक्तिको उच्च अपेक्षा र यदि कसैले छोटो भएमा, सेप्टेम्बरले धेरै चाँडै आलोचना गर्नेछ अक्टुबर अक्टुबरका बच्चाहरू धेरै हल्का र लापरवाह छन्। , तिनीहरू अत्यन्त स्वतन्त्र छन्, यदि तपाइँ सेप्टेम्बरमा जन्मनुभएको थियो भने तपाइँ प्राय: उज्ज्वल पक्षमा हेर्नुहुन्छ जब तपाइँ उज्ज्वल पक्ष देख्नुहुन्छ पृष्ठले तुरुन्तै देख्न सक्दैन, तब एउटाले खोजी गर्न प्रयास गर्नुपर्नेछ। अक्टुबरमा जन्मेका धेरै व्यक्तिहरू जहाँसुकै गए पनि उनीहरू रमाइलो र रमाईलो छन् किनभने अक्टुबरका बच्चाहरू रमाइलो र कुराकानी गर्ने बनाउँदछन् ताकि उनीहरूले नोभेम्बरमा साथी बनाउँदछन्, यदि तपाईं नोभेम्बरमा जन्मेका चीजहरू तपाईंको जन्म महिनाले तपाईंको बारेमा बताउँदछ नवम्बर बच्चाहरू सामान्यतया धेरै जिद्दी र धेरै गोप्य हुन्छन्, जब नोभेम्बरको बच्चा साँच्चिकै केन्द्रित हुन्छ, खराब सम्भावनाको सम्भावना यदि तपाई नोभेम्बरमा जन्मेका हुनुहुन्छ भने तपाई धेरै चतुर र आत्म-प्रेरित नवम्बर शिशुहरु कहिलेकाँही कसैको सहयोग लिन चाहनुहुन्न, यदि कोहीले पनि बग्स एक मि। नोभेम्बर बच्चाले सहयोग प्रस्ताव गर्दछ, तिनीहरूले सायद लिने छैनन् यी व्यक्तिहरू खुशी हुँदैनन् जबसम्म तिनीहरू आफैंले केही गर्न सक्दैनन् यदि तपाईं नोभेम्बरमा जन्मनुभयो भने तपाईं हुर्कन सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईं डिसेम्बर डिसेम्बर बन्न चाहनुहुन्छ भने मात्र बच्चाहरू हुन्छन्। रमाईलो र उनीहरू ध्यानको केन्द्र बन्न चाहन्छन जब तिनीहरू मान्छेले भरिएको कोठामा हुन्छन् सबै ध्यानाकर्षण तिनीहरूमा हुनु पर्छ यदि तपाईं डिसेम्बरमा जन्मनुभएको थियो भने तपाईं सायद घरमै धेरै सक्रिय रूपमा बस्नुहुन्छ र टिभी हेर्नुहुन्न जुन तपाईको कुरा चिया डिसेम्बर बच्चाहरु आफैमा गर्व गर्छन् र तपाईलाई केहि बाधा दिन तपाईले मन पराउनु हुन्न जब तपाई कुनै कुराले बाधा पुर्‍याउनुहुन्छ, तपाईलाई पछाडि लड्न कुनै समस्या हुँदैन त हामी कसरी महीना डेस्क गर्यौं? रिबे हामीलाई तल टिप्पणी सेक्सनमा जानकारी दिनुहोस् र तपाईं अधिकको लागि सदस्यता लिनुहोस्
नोभेम्बर on मा जन्मनु भनेको के हो?
यदी तिम्रोजन्मदिन नोभेम्बर। हो, योछसम्भव छ कि तपाईंछन्एक आध्यात्मिक व्यक्ति। तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँ यस पृथ्वीमा हुनुको कारण छ रकाम चल्छसबै तपाईंसक्छनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले यो उद्देश्य प्राप्त गर्नुभयो। कोनोभेम्बर birthday को जन्मदिनकुंडली भविष्यवाणी गर्दछ कि तपाईंछन्लजालु मान्छेगर्नुहोस्ध्यान मन पर्दैन।
हाई स्कूल जीवविज्ञानमा, हामी सामान्य रूपमा लिंगहरू निश्चित र मानवमा निर्दिष्ट हुन्छौं भनेर सिक्छौं। चाहे तपाईं पुरुष वा महिला कालो र सेतो हुनुहुन्छ र तपाईंको DNA मा जरा गाडेको छ: तपाईंको २rd औं क्रोमोजोम जोडी या त दुई एक्स क्रोमोसोम वा X र Y हो। यो कुरा हो।
कथाको अन्त्य। र वैज्ञानिकहरूले पनि त्यस्तै सोचेका थिए। तर यो बाहिर जान्छ कि सेक्स त्यति सजिलो छैन।
वास्तवमा, जीवविज्ञानीहरूले अब यौन भनेको स्पेक्ट्रम हो भन्छन्। र वैज्ञानिक समुदाय अझै पनि समग्रमा त्यो स्पेक्ट्रमको बिचमा पर्ने मानिसहरूलाई बुझ्ने र सम्मान गर्ने काम गरिरहेका छन: हामी यहाँ लि gender्ग वा यौनिकताका बारे कुरा गरिरहेका छैनौं। लि्गले सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषता र पुरुष र महिलाको समझ र उनीहरूको भूमिकालाई बुझाउँदछ - यद्यपि प्रत्येक संस्कृतिमा दुईटा मात्र कोटीहरू हुँदैन र बढ्दो स्पेक्ट्रमको रूपमा हेरिन्छ।
तपाईंले पहिचान गर्नुभएको लि्ग हुन सक्छ वा हुन सक्दैन जुन तपाईं आफ्नो लुगा र व्यवहारबाट व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ जुन सबै स्पेक्ट्रममा पनि हुन सक्छ। कामुकताले वर्णन गर्दछ कि तपाईं कसलाई आकर्षित गर्नुहुन्छ, र यो जटिल र स्पेक्ट्रममा हुन सक्छ। र जहाँ तपाईं यी स्पेक्ट्रामा हुनुहुन्छ निश्चित रूपमा आवश्यक छैन! तर आज हामी तपाईंको जीवविज्ञानको बारेमा कुरा गर्दैछौं, तपाईंको क्रोमोजोमहरू, तपाईंको हर्मोनहरू, तपाईंको गोनाडहरू, र तपाईंको जननांग सहित।
समात्ने हो, यी जैविक लक्षणहरू सँधै मेल खाँदैनन्, र ती पक्कै पनि हाई स्कूल स्वास्थ्य वर्ग चार्टहरूसँग मेल खाँदैनन् जसले हामीलाई बताउँदछ कि त्यहाँ एकल, विश्वव्यापी रूपमा सही तरीकाले पुरुष र महिला हुन सक्छ। वास्तवमा, यो अनुमान गरिएको छ कि लगभग २% प्रत्यक्ष जन्महरू atypical यौन विकासको जन्मजात अवस्थाको साथ जन्मेका हुन्छन्। यसको मूल अर्थ यो छ कि तिनीहरूको क्रोमोजोमहरू, हर्मोनहरू, गोनाडहरू, वा जननेन्द्रियहरूमा केहि व्यक्ति 'केटा' वा 'केटी' मा यौन विकास वा डीएसडीमा भिन्नताका साथ अपेक्षा गरेको भन्दा फरक छ।
र लगभग २% ले त्यति ठूलो नबोल्न सक्ने भए पनि यसको मतलब १ 130 करोड मानिस वा त्यो भन्दा बढी DSDs हुन सक्छ। यदि ती सबै व्यक्तिहरू एकै देशमा थिए भने, यो विश्वको शीर्ष १० अत्यधिक जनसंख्या भएको देशहरूमध्ये एक हुने थियो! थप, DSDs सधैं देखिने कुरा हुँदैन। व्यक्ति आफ्नो शरीरको रचनाको कारण एक लि gender्ग हो भनेर सोच्न आफ्नो सम्पूर्ण जीवन व्यतीत गर्न सक्दछ, केवल यो पत्ता लगाउन कि तिनीहरू मध्ये कम्तिमा एक फरक कथा भनिरहेछ।
तपाईं हेर्नुहोस्, तपाईंको लि sexual्ग दुबै यौन निर्धारण र यौन भिन्नताको परिणाम हो। यौन संकल्पको के तपाइँसँग प्राप्त क्रोमोसोमसँग सम्बन्धित छ। यसले मुख्य रूपमा यौन भेदभावको समयमा तपाइँको शरीरलाई के हुन्छ भनेर निर्धारण गर्दछ - जुन प्रक्रिया जुन तपाइँ तपाइँको लि with्गसँग सम्बन्धित शारीरिक लक्षण विकास गर्नुहुन्छ।
र तपाइँले सोच्न सक्ने विपरित, त्यो भेदभाव रोकिदैन एकचोटि तपाइँ फेरि नयाँ गरी जन्मनुभयो - यो तपाइँको जीवन भर जारी रहन्छ मतलब त्यहाँ धेरै पलहरू हुन्छन् जब मानिसहरू बीच मतभेद हुन सक्दछ - अवश्य पनि त्यहाँ धेरै परिणामहरू छन्! हामी यी परिणामहरू दृश्य बृद्धि शरीरको आधारमा दुई बाकसहरूमा विभाजन गर्छौं, वा वैज्ञानिकहरूले फेनोटाइपहरू के भन्छन्। फेनोटाइपिक पुरुषहरूको अण्डकोष र एउटा लि have्ग हुन्छन्, जबकि फेनोटाइपिक महिलामा अण्डकोष, गर्भाशय, योनी र एक भोल्भा हुन्छ। तर वास्तविकतामा, हामी लि the्गको बिच फरक पार्न प्रयोग गर्ने कुनै पनि गुणहरू वास्तवमै बाइनरी हुँदैन।
हामीले पुरुष वा महिला भनेर चिनिने भित्र धेरै भिन्नताहरू छन्, र त्यहाँ धेरै अतिव्यापनहरू पनि छन् जुन सामान्य पनि छन्। एनाटॉमिकली रूपमा कोही बाहिरबाट फेनोटाइपिकली फेमिनिन देखिन्छ तर अण्डकोश वा गर्भाशय नभएको वा अण्डाशय र अण्डकोषबाट टिश्यू हुन्छ। र आनुवांशिक स्पष्ट छैन किनकि जब यो क्रोमोजोम्सको कुरा आउँदछ, मानिसहरू जहिले पनि दुई X वा X र Y पाउँदैनन्।
X र Ys ले जीनहरू समावेश गर्दछ जसले लै gender्ग निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ, Y क्रोमोजम जीनको साथ तपाईंलाई पुरुष प्रजनन अंग विकास गर्न अनुमति दिन्छ अण्डाहरू वास्तवमै जटिल हुन्छन् र धेरै फरक परिणामहरू उत्पादन गर्न सक्दछ। यस प्रक्रियामा (संक्षिप्त संस्करण), विशेष कक्षहरू मूलत: नक्कल गर्दछ र त्यसपछि प्रजनन कोषहरू, वा गेमेटहरू उत्पादन गर्न विभाजनको दुई राउन्डहरू मार्फत जान्छन्, जसमा अभिभावकको आनुवंशिक सामग्रीको आधा हिस्सा हुन्छ। त्यसोभए यसले २ ch गुणसूत्रहरूको सेट बनाउँछ।
तर कहिलेकाँही क्रोमोजोम २ exact को सहि सेटहरूमा विभाजित हुँदैनन् - र यसको मतलब त्यहाँ एक्स र वाइको केहि सम्भावित संयोजनहरू छन् जुन एक व्यक्तिले समाप्त गर्न सक्दछ। मानवले तीन Xs वा एक X र दुई Ys प्राप्त गर्न सक्दछ। यी व्यक्तिहरू औसत भन्दा लामो हुन्छन्।
तिनीहरूसँग तीन X हरू पातलो छन् र कहिलेकाँहि हल्का सीख्ने असक्षमताहरू छन्। अर्कोतर्फ X र दुई YYs भएका मानिससँग तिनीहरूको एक्निस्टिसमा अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोनको कारण अधिक एक्ने हुने गर्छन। दुबै केसहरूमा मानिसहरूले पूर्ण प्रजनन क्षमता राख्छन्।
त्यसोभए टर्नर सिन्ड्रोम हुन्छ, जुन तपाईले भर्खर X पाउनु भयो। यसले स्त्री लक्षणहरू निम्त्याउँछ, तर मानिसहरुसंग जो छोटो हुन्छन्, वास्तवमा यौवनको माध्यमबाट चल्दैन, मानसिक अशक्त हुन सक्छ, र बाँझो हुन्छ। र Klinefelter सिन्ड्रोम, जुन दुई Xs र एक Y बाट परिणाम हुन्छ, सबैभन्दा सामान्य गुणसूत्र असामान्यता हो।
यो 600०० मा पुरुष जन्ममा १ मा देखा पर्दछ र टेस्टोस्टेरोन उत्पादन र अधूरो टेस्टिकुलर विकास कम हुन सक्छ, यद्यपि लक्षणहरू यति थोरै हुन सक्छन् कि एक व्यक्ति पछि जीवनमा निदान गरिने छैन। अब यो तथ्य पनि छ कि तपाईको शरीरमा तपाईका सबै कोशाहरूसँग एक समान गुणसूत्र रचना हुँदैन। कुन कसरी, के? मैले भर्खरै हाई स्कूलमा झूट मात्र सिकें? तर यो सत्य हो - एक मोज़ेक भएको व्यक्तिले एकल निषेचित अण्डाबाट विकास गर्न सक्दछ, तर आनुवांशिक रूपमा भिन्न कक्षहरूको प्याचवर्क छ।
र जो कोही आनुवंशिक चीमेराको फरक कोषहरू हुन्छन किनकि तिनीहरू दुई अलग-अलग उर्वर अण्डा कोषहरूबाट विकास गर्दछ जुन गर्भाशयमा फ्यूज हुन्छ, र दुबै केसहरूमा फरक-फरक सेक्स क्रोमोजोमको साथ कोषहरूको मिश्रण हुन सक्दछ, र ती कोशिकाहरूको वितरणमा निर्भर गर्दछ मोजेक र chimerism अस्पष्ट लि characteristics्ग विशेषताहरू वा दुबै पुरुष र महिला प्रजनन शरीरको अंगहरूमा लिन सक्छ। यो पनि देखाइएको छ कि गर्भवती महिला र उनीहरूका भ्रुणहरू प्राय: नालको पार स्टेम सेलहरू आदानप्रदान गर्दछन्, यो घटना माइक्रोचिम्रिस्म भनेर चिनिन्छ। यसको मतलब क्रोमोजोमल 'फिमेल' ले XY कोषहरू वरिपरि बोक्छ र उनको छोराले XX कक्षहरू लिन सक्दछ।
केही अध्ययनहरूले देखाए कि यी कोशिकाहरू दशकौंसम्म आमामा डबल एक्स वा XY क्रोमोसोम भएका मानिसहरूमा छन्, जसको यौन विकासमा पनि भिन्नता छ। यो अंश हो किनकि कम्तिमा २ 25 जीनले लैnes्गिक विभेदमा भूमिका खेल्छन्। दुबै उत्परिवर्तन र यी जीनहरूको स्थान परिवर्तनले विभिन्न भिन्नताहरू निम्त्याउन सक्छ।
उदाहरणको लागि, पुरुष विकासको लागि आवश्यक जीनहरू एक्स क्रोमोसोममा बदली गर्न सकिन्छ वा कसैले यीबाट अन्य लिंग निर्धारण गर्ने जीनहरूको बहु वा उत्परिवर्तनित संस्करणहरू प्राप्त गर्न सक्दछन् जुन अन्य क्रोमोसोममा अवस्थित छन् र सामान्य रेक्रिटिभ लक्षणहरूको रूपमा विरासतमा आएका छन्। यी सबै जीनहरू विकासको लगभग छ हप्ता पछि साँच्चिकै प्रभावशाली हुन सुरू गर्दछन्। तपाईले देख्नुभयो, छ हप्ता पछि, भ्रुणको जोर्नी बुल्जाको जोडी हुन्छ गोनाडल रेजेज भनिन्छ यसको मिर्गौलाको छेउमा - र तिनीहरूको अंडाशय वा टेस्टेजमा विकसित हुने सम्भावना हुन्छ।
भ्रुणको पनि यस बिन्दुमा दुई नल्टहरू छन्। एउटा सेट गर्भाशय र फेलोपियन ट्युबमा विकसित हुन सक्दछ जबकि अर्को सेटमा एपिडेडिमिस, भास्डेफेरन्स र सेमिनल वेसिकल बन्ने सम्भावना हुन्छ। जीनले चिल्छ MALE र FEMALE, र यदि त्यो सन्तुलन अलि झुकाइएको छ भने, यसले व्यक्तिलाई लैंगिक स्पेक्ट्रममा सार्न सक्छ।
SRY लिनुहोस्। १ 1990 1990 ० को दशकमा पत्ता लागेको यो पुरुष प्रोग्रामिंग जीन हो र यसले विकासमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यदि यो कसैको XX को क्रोमोजोममा अवतरण गर्छ भने यसले अंडाशयको सट्टा अण्डकोषको विकास गर्न सक्छ।
यो हुन सक्दछ किनकि शुक्राणु र अण्डाहरूको उत्पादनको चरण छ जब क्रोमोसोमहरू उनीहरूको पार्टनर क्रोमोसोमको साथ केहि डीएनए आदानप्रदान गर्छन्। र जे होस् X र Y गुणसूत्रहरू सामान्यतया यस DNA विनिमय प्रक्रियामा भाग लिदैनन्, कहिलेकाँही ती गर्छन्। साथै, अन्य उत्पादनहरू जुन गेमेट उत्पादनको क्रममा हुन्छन् एसआरवाई वा अन्य लिंग निर्धारण गर्ने जीनको बहु वा उत्परिवर्तनित संस्करणमा निम्त्याउन सक्छ - किनकि यो केवल जीन मात्र होईन जुन महत्त्वपूर्ण छ।
त्यहाँ जीनहरू पनि छन् जसले सक्रिय रूपमा भ्रूणलाई स्त्री लक्षण विकास गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। उदाहरण को लागी, WNT4 जीन वृषण विकास को दमन र गर्भाशय विकास को बढावा दिन्छ, र यसको धेरै प्रतिहरु XY को साथ मानिसहरुमा अपूर्ण महिला gonad विकसित गर्न सक्छ। गोनाडको विकासले लै gender्गिक-विशिष्ट हार्मोनको उत्पादनलाई पनि ट्रिगर गर्दछ, जसले लै gender्गिक-विशिष्ट विकासको लागि अग्रसर गर्दछ।
यद्यपि, केहि व्यक्तिहरूमा लै gender्गिक भिन्नतामा भिन्नताहरू हुन्छन् जसले ती हार्मोनहरूमा प्रतिक्रिया गर्ने तिनीहरूको क्षमतालाई सीमित गर्दछ। पूर्ण एन्ड्रोजन असंवेदनशीलता सिन्ड्रोम ती मध्ये एक हो। मानिससँग जो यो पुरुष हार्मोनबाट प्रभावित हुँदैन किनकि उनीहरूसँग प्रोटेनमा केही प्रकारको म्युटेसन हुन्छ जुन यी हार्मोन्सले बाँध्छन्, जसलाई एन्ड्रोजन रिसेप्टर भनिन्छ।
र यसको मतलब जब तिनीहरूसँग अण्डकोष र वाई क्रोमोसोम हुन्छन्, तिनीहरूको बाह्य जननेंद्रिय महिला वा बीचमा देखा पर्दछ। त्यहाँ जन्मजात एड्रेनल हाइपरप्लासिया पनि छ, त्यहाँ सबैभन्दा धेरै सामान्य DSD छ। त्यो बेला जब एड्रेनल ग्रंथिहरू कर्टिसोल र ओभर प्रोडक्ट एन्ड्रोजेनहरू उत्पादन गर्दछ, हार्मोनको पुरुष समूह जुन टेस्टोस्टेरोनको हो।
कोर्टिसोलको अण्डर प्रोडक्शनले स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउँदछ, जबकि बाह्य पुरुष जननेन्द्रियमा एन्ड्रोजनको अत्यधिक उत्पादनले एक्सएक्सओएस क्रोमोसोम भएका व्यक्तिहरूमा आन्तरिक महिला गोनाडसँग जोडी दिन्छ। यी मध्ये केही अवस्था यौवन वा पछि पूर्ण रूपमा देखा पर्दैन। वास्तवमा, केहि व्यक्तिको पहिचान हुँदैन जब सम्म व्यक्तिले उनीहरुलाई प्रकट गर्ने चिकित्सा हेरचाह गर्दैन।
२०१ 2014 मा डाक्टरहरूले children केटाको father० बर्षे बाबुको बारेमा रिपोर्ट गरे जसको उद्धरण 'हर्निया' फेलोपियन ट्युबको साथ गर्भाशयमा परिणत भयो। तर धेरै जसो केसहरूमा जन्मदेखि नै यौन विकासमा भिन्नताहरू छन्; यी नवजात शिशुहरूका लागि, तिनीहरू जेठो हुनाले तिनीहरू पहिचान गर्न सक्ने सम्भावनाको आधारमा लि assign्ग तोक्न सम्भव छ। कुरा यो हो कि सबै चीजहरू जुन यौन विकासको क्रममा हुन सक्दछ जब एक बच्चाको यौन विकासमा स्पष्ट भिन्नतासँग जन्म हुन्छ, यो किन सधैं स्पष्ट हुँदैन।
क्रोमोसोमहरू हेर्नु प्रायः पर्याप्त हुँदैन, र कहिलेकाँही हर्मोन परीक्षण पनि पर्याप्त हुँदैन। र बच्चाका डाक्टरहरूले के बुझेका छन् भने पनि, यदि कुनै उपचार आवश्यक छ भने चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। १ 60 s० को दशकमा यो सोचिएको थियो कि स्पष्ट परिभाषित यौन अंग बिना हुर्काउँदा भावनात्मक आघात हुन्छ।
तसर्थ, त्यहाँ शिशुहरूमा शल्य प्रक्रियाहरू प्रदर्शन गर्न आग्रह गरिएको छ स्पष्ट रूपमा उनीहरूलाई लि a्ग तोक्नुहोस्। त्यसोभए मानिसहरु आफैंको शरीरको बारेमा महत्वपूर्ण जानकारीहरु जान्दैनन्। यी शल्यक्रियाहरूमध्ये कति जना छन् वा प्रदर्शन भइरहेका छन् भनेर अंकहरू पाउन गाह्रो छ।
यी सर्जरीहरूले बिरामीहरूलाई कसरी असर गर्दछ भनेर ठ्याक्कै जान्न पनि गाह्रो छ, तर वयस्कहरूको रूपमा धेरैले पीडा, दाग, र संवेदनशीलता गुम्ने रिपोर्ट गर्छन्। डीएसडीका साथ व्यक्तिले लि gender्ग डिसफोरियाको उच्च दरहरू पनि रिपोर्ट गर्छन्, जसमा छनौट गरिएको लि gender्ग तोकिएको लि gender्गसँग मेल खाँदैन। र त्यहाँ लि gender्ग डिसफोरिया र मानसिक स्वास्थ्य मुद्दाहरूको बीचमा एक सम्बन्ध छ, जस्तै आत्म हानि, त्यसैले यी शल्यक्रियाहरू पछि जीवनमा मानसिक स्वास्थ्य मुद्दाहरूमा योगदान दिन सक्दछन्।
यद्यपि यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि त्यस्ता समस्याहरू कम सम्भावनाको साथ हुन्छन् जब व्यक्तिसँग सहयोगी र सकारात्मक आमाबाबु हुन्छन् जसले उनीहरूलाई को हुन् भनेर स्वीकार गर्छन्। र कहिलेकाँही शल्यक्रिया मेडिकल रूपमा आवश्यक हुन्छ, मूत्रमार्ग अनब्लक गर्न खुशी छ। साथै, शल्य चिकित्साले प्रजनन क्षमता कायम राख्न वा टेन्डिकुलर क्यान्सरको जोखिमलाई पूर्ण एन्ड्रोजन इन्सेन्सिबिटी सिन्ड्रोम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
तर चिकित्सा दृष्टिकोणबाट यी शल्यक्रिया शिशुहरूमा गर्नु आवश्यक पर्दैन। वास्तवमा, प्राय: जसो जन्मको समयमा जननांग शरीर रचनामा भिन्नताहरू सुधार गर्न आवश्यक पर्दैन। कमसेकम यस व्यक्तिको उमेर नपुगुञ्जेल सम्म उनीहरूको शरीर जस्तो देखिनुपर्दछ भन्ने बारेमा आफ्नै निर्णयहरू लिने।
आजकल स्वास्थ्य सेवा एक शल्य दृष्टिकोण बाट टाढा जाँदै छ। यदि डीएसडी जन्ममा निदान गरिएको छ भने, उपचारमा शल्य चिकित्साको सट्टा उपचार र हर्मोन प्रतिस्थापन समावेश छ। प्रायः DSD टोली हेरचाहमा संलग्न हुन्छ, जसमा आनुवंशिक विज्ञ, एन्डोक्रिनोलॉजिष्ट, र मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सक समावेश हुन सक्छन्।
हस्तक्षेप तुरुन्त र चिकित्सकीय आवश्यक छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न तपाईलाई परिवारलाई मद्दत पुर्‍याउँछ, र DSC र उनीहरूको परिवारको बाल्यकाल भर हेरचाह गर्न र समर्थन गर्न सहयोग गर्दछ। दुर्भाग्यवस, यस प्रकारको देखभाल अहिले कहिँ पनि उपलब्ध छैन। अन्वेषकहरू हालसालै दुबै लि sex्ग र लि gender्ग दुबैको विकासलाई अझ राम्ररी बुझ्न र बच्चाहरूले उनीहरूको आफ्नै लि identity्गको पहिचान बुझ्न थाल्दा यसबारे स्पष्ट ज्ञान प्राप्त गर्न काम गरिरहेका छन।
वास्तवमा समस्या भनेको तथ्य यो हो कि कपडादेखि शौचालयदेखि संगठित खेलकुदसम्म तिनीहरू बाइनरी नभएर बाइनरी संरचना वरिपरिको समाजमा हुर्केका हुन्छन्।
तर अन्वेषकहरू विचार गरिरहेछन् कि हामी कसरी हाम्रो सामान्य छलफल र सेक्सको समझ अझ पूर्ण र सही बनाउन सक्छौं। एक धेरै, धेरै जटिल संसारमा, जैविक सेक्स जुन ती चीजहरू मध्ये एक हुन सक्छ जुन यो तुलनात्मक रूपमा सरल छैन! र यसलाई अझै बुझ्नको लागि अझ धेरै लामो बाटो अझै बाँकी छ भने हामी प्रगति गरिरहेका छौं।
हामी जानु अघि हामी हामी प्याट्रियोनका हाम्रा संरक्षकहरूलाई एक विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छौं। तिनीहरूको समर्थन को लागी धन्यवाद, हामी यस जटिल र गाह्रो मुद्दाहरूको सामना गर्न सक्षम छौं। त्यसैले धन्यवाद, संरक्षक! र यदि तपाईं हामीलाई पनि समर्थन गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं Patreon.com/SciShow मा हाम्रो संरक्षक समुदायमा सामेल भएर थप सिक्न सक्नुहुन्छ।
नोभेम्बर 2007 २०० 2007 को राशि चिन्ह के हो?
के नोभेम्बरaएक वृश्चिक हो?
नोभेम्बर for का लागि राशि चिन्ह,2007: वृश्चिक।।। 2007
वृश्चिक विवाह कसले गर्नुपर्छ?
को लागी सबै भन्दा राम्रो खेलवृश्चिकमीन वा अर्को जस्तो देखिन्छवृश्चिकजबकि, लियो र मेष केही मामिलामा कम शुभ खेलहरू हुन सक्छन्। यद्यपिवृश्चिकजो आफूलाई रोमान्टिक रूपमा कम मिल्दो संकेतहरू मध्ये एकमा फसेको पाउँछन्हुनु पर्छनिराश छैन।
क्यान्सरसँग उपयुक्त छ?
सबैभन्दामिल्दोसंग संकेतक्यान्सरसामान्यतया वृष, कन्या, वृश्चिक र मीन मानिन्छ। कम्तीमामिल्दोसंग संकेतक्यान्सरसामान्यतया मेष र तुला मानिन्छ। सूर्य संकेत तुलना को एक राम्रो सामान्य विचार दिन सक्छअनुकूलता।
वृश्चिक कमजोरी भनेको के हो?
कमजोरीहरू: अरूलाई विश्वास गर्दैन, ईर्ष्यालु, आक्रामक, reticent।वृश्चिकमनपर्‍यो: सत्य, वास्तविक तथ्यहरू, सहि र सटीक भएको, लामो सर्तहरूको लागि साथी, उत्कृष्ट उत्कटता।
वृश्चिक कुन चिन्हबाट अलग रहनु पर्छ?
१२/१कुम्भ- वृश्चिक र वृषभ
वृश्चिक टाढाको कुम्भको लागि ज्यादै उत्कट छ, जसले कसैलाई जवाफ दिन मतलब गर्दैन। र अर्को व्यक्तिको सिद्धान्तहरू अनुसार खेल्ने इच्छा नराख्नु वृश्चिकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न रोक्न सक्छ। कुंभ राशिको लागि, अर्को राशि वृषभ हो।एक्काइस । २०२१
वृश्चिक आत्मीय साथी को हो?
कुन राशि चिन्हहरूवृश्चिक आत्मीय साथीहरू? राशि चिन्हहरूवृश्चिक आत्मीय साथीहरूवृष, कर्क, कन्या, मकर, र मीन समावेश गर्नुहोस्।१० २०२०।